DAAWO: Waa Maxay Su’aasha uusan Jawaabta u hayn MD Farmaajo ee Caalamku weydiiyo & Kaalinta Shabaab | afrikada news online
DAAWO: Waa Maxay Su’aasha uusan Jawaabta u hayn MD Farmaajo ee Caalamku weydiiyo & Kaalinta Shabaab
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa shaaca ka qaaday ineysan wax jawaab ah uheyn mar walba su’aalaha ay caalamka weydiiyaan taasna ay sabab u yihiin Kooxda Shabaab.
Waxaa uu aad uga naxay weerarkii ay Shabaab ku laayeen Shacabkii ku afurayay Pizza House iyo Hoteel Posh ee degmada Hodan halkaas oo dad aad ubadan ay ku dhinteen.
“Sidaad ogtihiin doraad dad masaakiin ah oo meel ka qaxweynaya, oo waqti Ramadan ku jira, ayaa dad sheeganaya magac diin waxay laayeen wax alaala wixii meesha joogay oo carruur, gabdho iyo du’qeyba, oo meesha ku afuraayay. Maxay galabsadeen? Maxay gaysteen?” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa sheegay inay jiraan su’aalo la weydiiyo, isla-markaana aanay wax jawaab ahi u haynin, haddii ay yihiin Madaxdii Qaranka Somaliyeed.
“Haddan masuuliyiin nahay su’aalaha ugu adag oo nala weydiiyo, aanan ka jawaabin karin waxay tahay war maxaad ku dagaaleysaan? Colaadda iska socota iyo dhibka idinku socda, muxuu ku saleysan yahay? Waxaan ku macnayno ma naqaano.” Sidaasi waxaa yiri Hogaamiyaha Somaliya.
Waxa kaloo uu yiri “Markaan ku dhahno war Afrika waad dhex gasheen, meelkastoo xarbul ahli ka dhacay, maxaad anaga noo fiirin weydeen? Jawaabta ugu sahlan waxay tahay bal noo macneeya waxaad ku dagaaleysaan?”
Isagoo hadalkiisa sii wata, ayuu yiri “Waxaad noo sheegtaan inaad tihiin dad isku isir, diin, dhaqan iyo luqad ah. Haddaad noo sharaxdaan waxaad isku dagaaleysaan, waan idin soo dhex galeynaa, sida kuwa kale aan u kala dhex galnay.”
Farmaajo, ayaa intaa ku daray “Marka anagaa la rabaa inaan macnayno. Waxa keliya aan anigu ku macnayn karo waxay tahay qof walbaa inuu Ilaahay u noqdo, dhibkaana ma haraayo. Labadaas arrimood aan sheegayna oo ah colaadda ama amni xumada iyo faqriga waxaa hoos yimaada waxkastoo bani’aadamka u daran. Waxaa hoos yimaada midnimo xumo, cudur, foolxumo iyo sharaf la’aan.”